Sniper Elite 5: Multiplayer uye Invasions muNew Trailer - Game Point - Bhodhi uye Vhidhiyo Mitambo
Mugadziri weBritish indie uye muparidzi Rebellion akaburitsa turera nyowani yeSniper Elite 5. Inoratidza zvidimbu zvevazhinji uye maitiro ekupinda kekutanga. Yese mifananidzo kubva muvhidhiyo yakananga kubva kumutambo.
Iwo anohwina mubairo wekupfura akateedzana anodzoka neSniper Elite 5 muna Chivabvu 26. Musoro uchaburitswa panguva imwe chete paXbox Game Pass, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 & 5, Epic Games Store, Steam uye Windows Store.
Mushandirapamwe wezita wakawanda wakaiswa muFrance muna 1944 uye unotenderera zviitiko zveD-Day. Mariri, mupfuri wevakuru vepamusoro Karl Fairburne anofumura kurangana kwakadaidzwa kuti Operation Krake iyo inotyisidzira kusimudzira hondo nekuda kweNazi. Karl anoshanda muchivande, anofamba kuseri kwemitsara yevavengi uye anofanirwa kushandisa hunyanzvi hwake hwese kumisa Operation Krake nenyanzvi yayo, Abelard Möller. Mushandirapamwe wese unogona kukwikwidzwa mu online co-op mode yevaviri. Vatambi vanogona kubatana kutarisana nemasimba eAxis uye kushanda pamwechete kumisa Möller.
Asi vanhu vanopikisa vanomirawo munzira yaKarl panguva ino. Mune itsva Invasion mode, vatambi vanogona kupinda muchikamu chemutambo seAxis sniper kunanga Karl pachake. Mupambi anoraira mauto eAxis AI anomubatsira kuronda kwaKarl. Uku kusimba kunokura kuita nerve-wracking mutambo wekati nembeva. Karl anogona kushandisa mafoni akaiswa padanho kuti aunganidze ruzivo rweanorwisa nenzvimbo yake. Invasion mode inogona kuvhurwa kana kuvharwa mumenyu yemutambo.
Iyo yevazhinji modhi haina kungogumira pamushandirapamwe, asi inopawo akati wandei emhando dzinonakidza dzehondo dzevatambi vakawanda. In Mapfuranhunzi Elite 5 Pane mana musimboti mutambo modes kusarudza kubva. Imwe neimwe inopa dzakasiyana siyana dzekugadzirisa sarudzo dzinokutendera iwe kugadzira machisi ezvaunofarira.
Iyo Sniper Elite nhevedzano yagara ichizivikanwa neayo epamusoro chombo fizikisi, iyo yakagadziridzwa zvakare muSniper Elite 5. Mamodheru ezvombo akateedzerwa pamamodheru azvo chaiwo zvakadzama kuti ave nechokwadi chechokwadi chepamusoro. Nekuda kweizvozvo, zvombo zviri muSniper Elite 5 zvinopa vatambi kunzwa kwakasiyana kana vachivashandisa.
Iyo kuuraya cam hunhu hweiyo nhevedzano yakadzokororwa zvakare. Pamusoro pepfuti uye kutora pasi kunouraya, kiriniki chaiyo pfuti uye SMG inouraya ikozvino inokonzeresa kuuraya cam. Mabara anodzoserwa nemapfupa, achiburitsa zvinotonyanya kukuvadza izvo zvinoratidzwa kuvatambi nenzira ine ropa kupfuura nakare kose. Weapon customization yakagadziridzwawo zvakanyanya. Stock, magazini, mugamuchiri, dhiramu, kuona nekuona neteresikopu pamwe chete nezvinhu zvechombo zvino zvinogona kuchinjwa maererano nezvido zvomunhu pachake. Vatambi vakasununguka kugadzirisa arsenal yavo zvichibva pane zvavanoda uye chinangwa chiripo. Idzo sarudzo dzekugadzirisa dzakavhurwa mumutambo nekutsvaga mabhenji ebasa akavanzwa pamepu. Vatambi vanogona ipapo kugadzirisa midziyo yavo ipapo. Saka iwe unogona kushandura yako playstyle uye kusvika panhunzi pasina kutangazve mishoni.
New movement mechanics inopa dzimwe sarudzo pakusarudza nzira. Zvichienderana nezvavanosarudza, vatambi vanogona kunyangira mimvuri chinyararire kana kuenda-ne-musoro nemuvengi. Nekugona kukwira lianas, Karl ave kukwanisa kuvhura nzvimbo nyowani dzemepu. Izvi zvinovhura nzira nyowani dzekubira, nzvimbo dzakanaka dzevantage uye kuwana nzvimbo dzakavanzika, izvo zvinowedzerawo kukosha kwekudzokorora kwechinangwa chega chega.
Season Pass inouya yakazara nezvinhu zvinotevera:
2 misheni yemushandirapamwe
2 chombo ganda packs
6 mapaketi ezvombo
Sniper Elite 5 ichaburitswa panguva imwe chete muna Chivabvu 26, 2022 paXbox Game Pass, Xbox One, Xbox Series X | S, uye PlayStation 4 ne5, uye PC kuburikidza neEpic Games Store, Steam, uye Windows Store. Ma-pre-odha ave kugona. Ese ma-pre-odha anogashira yekuwedzera Target Guide campaign campaign ine musoro Wolf Mountain. A deluxe edition inowanikwawo. Izvi zvinosanganisirawo Season Pass One neP.1938 Suppressed Pistol yemapre-oda.
Sniper Elite 5 - Deluxe Edition [PlayStation 5] * Parizvino hapana ongororo 89,99 EUR tenga
Kare Star Wars Tag: 5 yakanaka Star Wars bhodhi mitambo
Inotevera Wildcat Pfuti Machine: Shooter - zvakare nekatsi
Vietnam board game Purple Haze inotanga mari
Dune: Imperium inogamuchira kutsigirwa kweapp uye yega uye duo modes
Pre-oda iyo Xbox Series X: Yekutanga inonyaradza inogara pane auction mapuratifomu
Nyika Itsva: New update inounza kuenzanisa shanduko